FIFA dia iray amin'ireo andian-dahatsary malaza indrindra eran-tany. Eo ambanin'ny elatra fiarovana an'ny Electronic Arts, isan-taona dia toko vaovao amin'ny fanahafana ofisialy ny baolina kitra, na ara-batana na amin'ny dizitaly, no mamaky talantalana amin'ny fivarotana ara-potoana, vonona hampifaly mpankafy an-tapitrisany avy amin'ny vazan-tany rehetra. Iray amin'izy ireo ianao, saingy tsy dia manam-pahaizana loatra amin'ny lalao; raha ny marina dia tsy azonao ny fomba fanaovana ny fahaiza-manao.
Ny marimarina kokoa dia nanontany tena ianao tato ho ato ny fomba fanaovana dingana roa ao amin'ny FIFA fa tsy nahita tutorial tsotra manazava ny fomba hanaovana azy. Marina ve izany? Aza manahy: raha tianao dia azoko atao ny manazava ny fomba hahatratraranao ny tanjonao. Etsy ankilany, na dia azo atao aza ny milalao ny lohatenin'ny andia FIFA izay tsy mampiasa afa-tsy ny mekanika fototra, ny fianarana ny fahaiza-manao dia "mozika" hafa tanteraka!
Inona ary no lazainao? Vonona ny hijery lalina ny fahamendrehan'ity mekanika FIFA mandroso "ity ianao? Raha ny fahitako azy dia tsy andrinao ny "mametraka" an'io mpiaro anao io izay manandrana manakana ireo mpilalaoo mandritra ny dingana manafintohina anao. Andao handeha amin'izay, eto ambany no hahitanao ny fampahalalana rehetra momba ilay raharaha. Tsy manan-katao intsony aho afa-tsy ny maniry ny hamaky sy ny fahafinaretana ho anao.
Ahoana ny fomba hanaovana dingana roa ao amin'ny FIFA
Ahoana ny fomba fampiofanana amin'ny FIFA handraisana ny dingana roa
Ahoana ny fomba hananganana dingana roa ao amin'ny FIFA Mobile
Alohan'ny hidiranao ireo antsipirihan'ny fomba fiasa ao ny fomba fanaovana dingana roa ao amin'ny FIFAMieritreritra aho fa mety hahaliana anao ny hahafantatra bebe kokoa momba ity "hetsika baolina kitra" ity.
Eny ary, ny paositra roa sosona dia fintina natao manakorontana na mampikatso ny mpanohitra. Izany hoe, manandrana maka tahaka ny fifandraisana amin'ny baolina izay tsy tena izy izahay, ary avy eo mamily ny farany amin'ny teboka tsy ampoizin'ny mpilalao hafa.
Raha fintinina dia mora lazaina kokoa noho ny vita ary azo antoka raha manaraka ny baolina kitra ianao dia efa fantatrao izay lazainao. Double Pass dia efa misy ao amin'ny FIFA mandritra ny taona maro ary matetika ampiasaina amin'ny fiverenan'ny sosona sisiny ary asio a Cross ny Sintony.
Ao amin'ny lohatenin'ny andian-tsarimihetsika Elektronika, raha ny marina, ny mekanika fandefasana indroa dia ilaina indrindra eo akaikin'ny faritry ny sazy, indrindra rehefa mihaona amin'ireo mpilalao mbola tsy mianatra mifehy tsara ireo dingana fiarovana ianao.
Raha fintinina dia azoko tsara ny antony manosika anao hianatra ny fomba hanaovana an'io feint io amin'ny lalao video soccer tianao indrindra ary raha ny marina dia eto amin'ity torolàlana ity ity torolàlana ity.
Raha manontany tena ianao dia tsy mila manahy be loatra momba ny toko FIFA anananao; Amin'ny ankapobeny, ny mekanika mandalo indroa dia mitovy amin'ny editions rehetra. Ka te hahalala ianao ny fomba fanaovana dingana roa ao amin'ny FIFA 21, FIFA 20 na toko hafa amin'ny andiany, manaraka ny torohevitro dia tokony hahatratra ny tanjonao ianao raha tsy misy olana manokana.
Rehefa avy nanazava fohifohy ny tanjona dingana roa, Lazaiko fa tonga ny fotoana hampihetsi-po sy hanazavana ny fomba fametrahana azy FIFA.
Hanohizana, raha vao miditra amin'ny lalao ianao, na amin'ny fomba inona na inona, afindrao tsotra izao ilayankatoka mankany amin'ny lalana e manao ny marina analog manao 90 degre "antsasaky ny volana". Rehefa manao izany ianao dia ho hitanao fa ilay mpilalao fehezinao dia hanatanteraka ilay dingana roa.
Tsy maintsy mianatra tsara ianao any fanontaniana zoro manoloana izay hifindra ny analog mety. Miankina amin'ny ny toeran'ny vatanao mpilalao, noho izany dia tokony hihaino tsara ianao ohatra rehefa manomboka amin'ny tsora-kazo havia ary hamita ny fihetsika miankavanana na rehefa hanao ny mifanohitra amin'izay.
Ny fomba tokana ahafantarana tsara ny fomba fanaovana izany dia ny fiezahana hanao izany mivantana raha mihazakazaka amin'ny baolina amin'ny maody FIFA rehetra. Raha fintinina dia iray amin'ireo fahaiza-manao izay tokony hiezahanao hianaranao imbetsaka hianarana.
Mazava ho azy fa miankina aminao izany tariho amin'izay tadiavinao ny feint, ka raha hanao an'io dia tsara andramo imbetsaka hanatanteraka ny hetsika. Raha ny tena izy, na dia mora apetraka aza ny mekanika mandalo indroa, dia tonga ny fahasarotana rehefa hitrandrahana tsara azy io mandritra ny lalao FIFA mikorontana.
Raha tsy izany, FIFA dia lohateny lalaovina -maso koa amin'ny PC, toy izany koa ny fomba. Azo antoka fa ny toko sasany amin'ity andiany ity dia mamela anao hampiasa totozy sy fitendry, saingy tena mamporisika anao aho tsy hanandrana hanao fahaiza-manao amin'ireto fomba fampidirana ireto, satria mety tsy hahomby ianao ary na izany na tsy izany dia mety hanana fatiantoka ianao. mifaninana.
About Wiki hampivelaranaAo anatin'ny lalao "canonical" an'ny andian-tsarimihetsika Elektronika dia misy fomba mety kokoa noho ny hafa mba hizaha toetra ny roa heny.
Ny marimarina kokoa, manoro hevitra anao aho handeha, manomboka amin'ny efijery lehibe an'ny FIFA, ao amin'ny takelaka NY TENAN'ANDRIAMANITRA. Eto no tokony hahitanao ny safidy Andramo ny fahaiza-manao sa tsara kokoa Sehatra fiofanana.
Amin'ny tranga voalohany dia azo atao ny mifantina hetsika mitete, angamba ireo nandroso, izay nifanatrehana taminao mpiaro tsy maintsy manakana anao. Ity tontolon-kevitra ity dia mety ho tena ilaina amin'ny fampiofanana miaraka amin'ny dingana roa ary miezaha hampiasa azy handresena ny mpanohitra.
Na izany aza, amin'ny trangaSehatra fiofanana, mametraka anao ity farany manoloana ny mpiandry tsatokazo, manome antoka anao a toerana malalaka mampiofana amin'ny fahaiza-manao. Ity angamba no fomba mahasoa indrindra hampiofanana amin'ny dingana roa, satria manana ny fiadanam-po rehetra eto an-tany ianao hanao izany.
Amin'ny ankapobeny dia tsy mahomby tanteraka ny andrana indroa voalohany, satria mekanika tsy maintsy andramana ary "ampidirina anaty". Noho izany dia manoro hevitra anao aho hampiofana eto, manandrana mandeha amin'ny lalana maro ary mandray ny dingana roa.
Ny fotoana vitsivitsy, raha tsy vitanao io fahaiza-manao io dia mety ho tonga mora raisina ataovy mihodina kokoa ny analog, mba ho hitanao ny hevitr'ity farany. Na izany aza, manoro hevitra anao aho hampiasa io fomba io ho toy ny teboka fanombohana fotsiny ary avy eo mianatra ny fomba hanararaotana ny dingana roa.
Raha ny marina, ny fampiasana ny analog mazava tsara "sendra" kely dia mety hitarika fihetsika tsy ilaina mandritra ny lalao. Raha fintinina, ny fomba tsara indrindra hianarana dingana roa, raha vao fantatrao ny bokotra, dia andramo imbetsaka amin'ny "saha malalaka", mandra-pahatongan'ny fahafantarana ny fahaiza-manao.
Fantatro: ny fanatanterahana an'io fandidiana io dia mety ho "mankaleo", fa raha te hianatra hampiasa ny mekanika lalao ianao dia tokony.
Ahoana ny fiteny hoe? Ianao taloha dia nilalao FIFA Mobile (aka FIFA Soccer) amin'ny findainao finday na takelakao ary tianao ho fantatra raha azo atao ny mandingana indroa amin'ity kinova ity amin'ny lalao? Tsy misy olana, hazavaiko avy hatrany izay rehetra tokony ho fantatrao.
Amin'ity tranga ity, ny rafitra fahaiza-manaon'ny lalao dia "mikorontana". Raha ny marina, araka ny azonao vakiana amin'ny vavahady ofisialy Electronic Arts, ny mpilalao tsirairay dia samy manana ny fihetsiny, izay azo atao amin'ny alàlan'ny mihodinkodina eo ambonin'ny bokotra Shot & Skill.
Anisan'ireo fahaiza-manao misy amin'izany ny Croquette, ombelahin-tongony, lasitike, bisikileta ary nyatsangano amin'ny tendron'ny tongotra ny baolina. Noho izany, tsy azo atao ny manao dingana roa, raha tsy hoe miaraka amina mpilalao manokana, fa amin'ny zavatra niainako dia tsy mbola hitako mihitsy io fahaiza-manao io tamin'ny lalao.
Na izany na tsy izany, ny FIFA Mobile dia mazava fa manana lalao voafetra kokoa noho ny toko nentim-paharazana amin'ity andiany ity, ary noho io antony io, ny fahaiza-manao dia mitana andraikitra bebe kokoa eo amin'ity kinova ity.
Ho an'ny ambiny, satria mpankafy ny andian-tsarimihetsika Elektronika ianao dia mamporisika anao aho hijery ny pejin'ny tranokalako natokana ho an'ny FIFA, izay ahitanao mpitari-dalana hafa mety ho anao.
Ahoana ny fomba hanakanana ireo antso an-tsary amin'ny WhatsApp